Soo iibso budada Cetilistat (282526-98-1) Soosaaraha & Warshadaha
Budada Cetilistat waa daawo loogu talagalay in lagu daweeyo buurnida. Waxay u shaqeysaa si la mid ah sida daawada orlistat-ka ee duugga ah (Xenical) iyadoo la xakameynayo lipase pancreatic, enzyme kaas oo jebiya triglycerides xiidmaha. La'aanteed enzyme-ka, triglycerides-ka cuntada ayaa laga horjoogsanayaa in si habeysan loogu shubo unugyada dufanka bilaashka ah ee la qaadan karo waana laga takhalusaa undigested. Cetilistat waxaa la muujiyey inuu soo saaro culeys la mid ah orlistat.
Budada Cetilistat (282526-98-1) fiidiyaha
Macluumaadka Saldhigga budada ee Cetilistat
magaca Dufanka Cetilistat
xagiisayna 98.0% (HPLC)
Magaca kiimikada 2-(hexadecyloxy)-6-methyl-4H-3,1-benzoxazin-4-one
Isku mid ahaanshaha Cetilistat
Miisaanka kelli 401.591 g / mol
Dhibicda Biyaha 74-76 ° C
Muhiimadda InChI MVCQKIKWYUURMU-UHFFFAOYSA-N
Imaanshaha Cad ilaa Off-White Powder
Nolosha badh Nolosha badhkeed ee 9.4-16 h aadanaha, oo ka dheer tan jiirka (4.4 h) iyo eeyaha la quudiyey (7.3 h)
milmi Chloroform (Isbarbar dhig), Ethyl Acetate (Si tartiib tartiib ah)
kaydinta Xaaladda qaboojiyaha
Codsiga Baadhitaan loogu talagalay isticmaalka / daaweynta buurnaanta.
Budada Cetilistat Qeexida Guud
cayilka boodhku waa aafo casri ah oo ka jirta dalalka warshadaha leh iyo kuwa soo koraya, imikana cayilka iyo cayilka ayaa sababa dhimashada adduunka oo dhan marka loo eego miisaanka yar. Cetilistat waa sheeko, afka firfircoon, caloosha iyo dheef -shiidka lipase inhibitor. In vitro studies cetilistat ayaa ka hor istaagtay lipase beeryarada bini'aadamka IC50 oo ku jirta xadka nanomolar ee hooseeya. Marxaladaha labaad ee bukaan-socodka buurnida iyo bukaanka cayilan ee leh nooca sonkorowga 2, cetilistat oo la maamulo 12 toddobaad ayaa si weyn hoos ugu dhigay miisaanka jidhka, serum lipoprotein (LDL) kolestarool iyo kolestaroolka oo dhan marka la barbar dhigo placebo. Saamiga bukaannada cayilan ee gaadhay hoos u dhaca miisaanka jirka aasaasiga ah ee ugu yaraan 5% ayaa ka weynaa dhammaan gacmaha firfircoon marka la barbar dhigo placebo. Bukaannada sonkorowga ee cayilan heerarka glycosylated hemoglobin (HbA1c) ayaa sidoo kale si aad ah hoos loogu dhigay. Cetilistat waxay muujisay dhacdooyin aan fiicnayn oo dhexdhexaad ah, badiyaa dabeecadda caloosha (steatorrhea), oo dhacdadu ka hooseyso orlistat. Waxaa dhowaan lagu ansixiyay Japan si loogu daaweeyo buurnaanta oo leh dhibaatooyin.
Budada Cetilistat (282526-98-1) Taariikh
Waxaa soo saaray Alizyme, oo ah shirkad takhasus leh oo ku takhasustay cilmiga biopharmaceutical oo kaashaneysa Takeda Pharmaceutical, cetilistat (ATL-962) waa daaweyn tijaabeynaysa buurnaanta. Cetilistat waxay xaddideysaa harooyinka beerka ku dhaca waxayna u shaqeeyaan sidii wakiilo loo daaweeyo buurnaanta iyo cudurka sonkorowga ama cudurka dyslipidemia.
Waxay ku keentaa miisaanka oo yaraada oo dufan ka nuugo cuntada. Daroogadu waxay u dhaqmeysaa si isdaba joog ah si ay u dhinto rabitaanka cuntada, iyadoo aan wax saameyn ah ku yeelan maskaxda.
Bishii Disembar 2008, Takeda waxay Japan ka bilowday daraasad caafimaad oo wejiga labaad ee cetilistat. Horumarka laga sameeyay tijaabooyinka wajiga III ayaa raacay dhiiri galinta xogta wajiga tijaabada ee sheybaarka cetilistat wuxuu sare uqaaday miisaanka oo yaraada waxaana guud ahaanba si wanaagsan loogu dulqaatay bukaanada caafimaad ahaan aadka u buurnaa.
Takeda waxay qiimeysay xogta wejiga labaad ee Yurub ee cetilistat bishii Ogosto 2003 iyo bishii Janaayo 2004 waxay heshiis la gashay Alizyme si ay u horumariso, waxsoosaarka iyo suuqgeynta suuqgeynta Japan.
Bishii Oktoobar 2012, Takeda waxay u gudbisay Codsiga Daawada Cusub (NDA) ee Cetilistat Wasaaradda Caafimaadka, Shaqada iyo Daryeelka ee Japan si loogu daweeyo buurnaanta.
Baadhitaanka hadda jira ee Alizyme iyo horumarka ayaa diiradda lagu saaray daweynta cudurada caloosha, buurnaanta, kansarka iyo kaadi macaanka.
Cetilistat (282526-98-1) Farsamooyinka Ficil
Cetilistat waa xakameynta lipase caloosha oo xannibaysa dheefshiidka dufanka iyo nuugista, taas oo horseedaysa hoos u dhaca tamarta, sidaasna miisaanka oo yaraada. Waxay kaga duwan tahay wakiilada kale ee ka hortaga cayilka sababta oo ah kuma shaqeyso maskaxda inay yareyso cunada, laakiin ficil ahaan waa ay kacsan tahay. Xaruntu waxay ku sii jirtaa marinka caloosha iyo mindhicirka iyada oo aan jirka si fiican u soo nuugin.
Cetilistat (282526-98-1) Codsi
Cetilistat, oo hoos yimaada magaca sumadda Cetislim, Checkwt, ama Kilfat, waa dawo cusub oo hadda ku socota tijaabooyin iyo tijaabooyin caafimaad oo qaybo kala duwan oo adduunka ah oo wax ku ool ah.
Cetilistat waxaa lagu kala gartaa qaybta "buurnaanta ka hortagga cayilka ama dawooyinka 'anorectic'. Cayil xad dhaaf ahi wuxuu ku dhacaa mid ka mid ah arrimaha ugu waaweyn ee wakhtigan casriga ah, badiyaa waddamada horumaray iyo kuwa warshadaha ka shaqeeya.
Cetilistat waa daawo ka hortag ah buurnida. Waxay ugu horreyn u shaqaysaa sidii caloosha iyo caloosha.
Cetilistat waxaa loo isticmaalaa in lagu kabo cunto caafimaad leh iyo jimicsi muddo gaaban ah ee daaweynta buurnaanta. Cetilistat waxaa sidoo kale loo isticmaalaa ujeedo aan laga helin tusaha daawada.
Cetilistat waa tijaabo cayilka ka hortagga daroogada waxaana hadda lagu baarayaa Japan, Mareykanka, iyo Yurub. Sababtoo ah Cetilistat waxay maraysaa tijaabooyin caafimaad, ma jirto wax -ku -oolnimo ama badbaado la xaqiijiyey illaa iyo hadda dawadan.
Cetilistat (282526-98-1) Baadhis dheeraad ah
Tijaabooyinka bini'aadamka, cetilistat waxaa lagu muujiyey inuu soo saaro culeys la mid ah tan orlistat, laakiin wuxuu kaloo soo saaray waxyeelo la mid ah sida saliida, saxaro dabacsan, calool istaaga, saxarada soo noqnoqda, iyo caloosha. Waxay u badan tahay in taxaddarradi la mid ah ay ku dabaqmi karto nuugista fiitamiinnada dufanka leh iyo nafaqada kale ee dufan leh ayaa la xakamayn karaa, taasoo u baahan fiitamiinnada kaabayaasha ah ee loo istcimaalo si looga fogaado cilladaha.
Cetilistat waxay soo gabagabeysey Wajiga 1 iyo 2 tijaabooyinka Galbeedka waxayna hadda ku jirtaa Wajiga 3 tijaabooyin Japan halkaas oo ay iskaashi la leedahay Takeda. Norgina BV waxay hadda heshay xuquuq buuxda oo caalami ah oo ku saabsan cetilistat-ka Calizyme ka dib markii uu maamulka bilaabay.
Tijaabad 2 waji ah oo la soo saaray ayaa lagu ogaaday in cetilistat uu si weyn hoos udhacay culeyskiisi uuna sifiican ugu dulqaad badanyahay orlistat.
Cetilistat (282526-98-1) Tixraac
Yamada Y, Kato T, Ogino H, Ashina S, Kato K: Cetilistat (ATL-962), waa xaydaab jilicsan oo jilicsan oo jirka ka mid ah, waxay wanaajisaa miisaanka jirka oo kor u qaada muuqaalka burooyinka ee jiirka. Horm Metab Res. 2008 Agoosto; 40 (8): 539-43. doi: 10.1055 / s-2008-1076699. Epub 2008 Meey 21.
Elafibranor (GFT505) Powder – Dawada cusub ee Daraasada Daaweynta NASH
Budada N-Methyl-D-Aspartic Acid (NMDA) budada (6384-92-5)